विशेष जित्छु भनेर ढुक्क भएकी मञ्जु चौधरी कसरी हारीन्
Ujyaalo मगलवार, मंसिर २६, २०७४ ०५:४९:००
सुजाता खत्री / उज्यालो
काठमाडौं, मंसिर २५ – वाम गठबन्धनकी उदयपुर क्षेत्र नं को प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार मञ्जु चौधरीले आफु हार्छु भन्ने सोच्नु नै भएको थिएन । तर प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेससँग ५ सय ४८ मत अन्तरले हार व्यहोर्नु परेको खबर चौधरीले स्वीकार्नु परेको छ । नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएकी चौधरीले २०७० सालको दोश्रो संविधानसभा चुनावमा उहाँले कांग्रेस नेतृ प्रमिला राईलाई जम्मा २२ मतले मात्र पछि पार्नुभएको थियो ।
तर योपालि चौधरीले प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसलाई हराउन सक्नु भएन । हरेक पटक मतगणनाको पछिल्लो परिणाम सार्वजनिक हुँदा कहिले ८ मतले पछि, कहिले ३१ मतले अगाडि सुन्दा पनि चौधरीलाई अलिकति पनि डर लागेको थिएन ।
चौधरी नडराउनु स्वाभाविक थियो । देशभरकै चुनावी नतिजा सार्वजनिक भइरहँदा वाम गठबन्धनले धेरैजसो ठाउँमा विजयी भइरहेको थियो । अझ केही ठाउँमा नेपाली कांग्रेसको अप्रत्याशित हार व्यहोर्नु परेको छ । मोरङ क्षेत्र नं ६ मा शेखर कोइराला, मोरङ ४ मा नै अमनलाल मोदीसँग महेश आचार्यको हार, त्यस्तै नुवाकोट १ मा हितबहादुर तामाङसँग डा. रामशरण महत लगायतका नेताले हार बेहोर्नु वाम गठबन्धनका उम्मेदवारलार्ई ढाडस दिने खबर थिए । त्यसैले कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्का आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी हुनु खतरा होला जस्तो लागेको थिएन । तर नतिजा प्रत्यासित भएन ।
‘नसोचेको कुरा पनि हुँदो रहेछ ।’ उज्यालो अनलाइनसँग कुरा गर्दै मञ्जु चौधरीले भन्नुभयो, ‘सायद आफैबाट केही कमजोरी भयो होला ।’ चौधरीलाई यो पटकको आफ्नो हार नागरिकलाई राम्ररी बुझाउन नजानेकोले भएको हो जस्तो लाग्छ । उदयपुरमा ४ हजार ८ सय ८९ मत बदर भएको थियो । चौधरीलाई बदर भएका धेरै मत आफ्नो पक्षमा रहेको जस्तो लाग्छ ।
प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारमा महिलाको सहभागिता एकदमै कम छ । प्रतिनिधिसभाको १९४५ उम्मेदवारमा २७ दलबाट १४६ जना महिला उम्मेदवार छन् । नेपाली कांग्रेसले ९ जना, वाम गठबन्धनले ५ जना, माओवादी केन्द्रले ४ जना, संघियसमाजवादी फोरमले ४ जना, राजपाले ६ जना महिला उम्मेदवार छन् । राप्रपाले भने एक जना पनि महिला प्रतिनिधि उठाएको छैन । चुनावी प्रतिस्पर्धामा जितेर महिला संसदमा हाजिर हुन पाउनु राम्रो हुने चौधरीको भनाई छ । महिलालाई समानुपातिकबाट संसदमा लैजानु नियमअनुसार कोटामात्र भर्नको लागिमात्र भएको जस्तो लाग्छ चौधरीलाई । चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘आफैले जितेर जाँदा जतिको सम्मानजनक हुँदैन ।’
चौधरीलाई यो हारले त्यति विचलित भने बनाएको छैन । कसैको जित हुन्छ भने कसैको हार स्वाभाविक नै हो । नतिजा जे आएपनि उहालाई सम्मानजनक भोट पाएकोमो भने खुशी लागेको छ । ‘मेरो राजनीतिक जीवनमा यसले अङ्कुश भने लाग्दैन ।’ चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘आफूले हारे पनि अब पछिको समयमा अरुलाई जिताउने काममा लाग्छु ।’
एक तिहाई महिलाको समभागिता अनिवार्य हुनुपर्नेमा अहिलेको अवस्था हेर्दा निरासाजनक छ । चौधरीलाई यो पटक प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी जितेर महिला वर्गमा उत्साह थिप्ने, उर्जा थप्ने इच्छा थियो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘म नै प्रतिनिधि भएर जानु पर्छ भन्ने छैन, जो गए पनि देशका हरेक क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।’
२०४५ सालदेखि अनेरास्ववियूबाट राजनीति सुरु गरेकी मञ्जुले २०४७ सालमा नेकपा एमालेको सदस्यता प्राप्त गर्नुभएको थियो । २०४९ सालमा अखिल नेपाल महिला संघको जिल्ला सम्मेलन आयोजक कमिटी सचिव भएकी चौधरी २०६४ सालमा अनेमसंघको जिल्ला अध्यक्ष हुनुभएको थियो ।
अनेमसंघको छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्यमा चयन भएकी चौधरी २०५५ सालमा नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटि सदस्य बन्नुभयो । उहाँ अनेमसंघको अञ्चल सचिव र नेकपा एमाले जिल्ला कमिटि उदयपुरको उपाध्यक्ष समेत हुनुभएको छ ।